ပါရာစီတမော နဲ့ ကော်ဖီ တွဲ သောက် တက်တဲ့ မိတ်ဆွေ ရှိရင် အချိန် ခဏလေး ပေးဖတ်သွားနော်
ပါရာစီတမော နဲ့ ကော်ဖီ တွဲ သောက် တက်တဲ့ မိတ်ဆွေ ရှိရင် အချိန်ခနလေး ပေးဖတ်သွားနော် ပါရာစီတမော နဲ့ ကော်ဖီ လုံးဝတွဲမသောက်သင့်ပါ .. အချိန်ခဏလေးပေးပြီး ဖတ်ကြည့်ပါနော် … ။ ပျင်းလို့ ဆိုပြီးလည်း ကျော်မသွားကြပါနဲ့ … စေတနာနဲ့ပါ … ။ သိပြီးသားသူတွေကလည်း မသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါနော် … ။ အခုပြောပြပေးမဲ့ အကြောင်းရာကတော့ ပါရာစီတမော “Paracetamol” အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ ပါရာစီတမောကို ဆရာဝန် ညွှန်ကြားမှု မရှိပဲ အလွယ်တကူ ဝယ်သောက်နေသူများ များပြားလာပါပြီ … ။ နေမကောင်းလို့ …
ဆီးဖြူသီး နှင့် ငါးရံ့ စားယုံဖြင့် ဆီးချိုရောဂါကို အမြစ်ပြတ် ပျောက်ကင်းစေနိုင်
ဆီးဖြူသီး နှင့် ငါးရံ့ စားယုံဖြင့် ဆီးချိုရောဂါကို အမြစ်ပြတ် ပျောက်ကင်းစေနိုင် ဆီးဖြူသီး (၁၀) လုံးနှင့် ငါးရံ့ (၁၀) ကျပ်သား စားရုံဖြင့် ဆီးချိုရောဂါကို အမြစ်ပြတ် ပျောက်ကင်းစေ နိုင်ပါပြီ …။ တစ်ပတ်( ၁)ကြိမ် (၃)ကြိမ်စားပြီးပါက ဆီးချိုရောဂါ အခြေနေကို ပြန်လည်စမ်းသပ်ရန် (၆)လခွဲ စွဲစားပါက အမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းကြောင်း ဖတ်ရှု ရသဖြင့် ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ် …။ ဆေးနည်း…. ဆီးဖြူသီး (၁၀)လုံးနှင့်ငါးရံ့ (၁၀)ကျပ်သား ရောချက်စားရုံသာ……(၃)ကြိမ်မျှစားရုံဖြင့် ဆီးချိုလက်တွေ့သက်သာကြောင်းတွေ့ရှိ၍ (၆) လခွဲ စွဲစားပါက အမြစ်ပြတ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ် …။ အထက်ပါ ဓာတ်စာစားနေချိန်ကာလအတွင်း၌ အချိုရည်မျိုးစုံများ အချိုဓာတ်ပါရှိသောအစားအသောက်များ….အထူးသဖြင့် သရက်သီးမှည့် ပိန္နဲသီး …
အပျိုကြီးဘဝနဲ့အရိုးထုတ်သွားရမယ့်သူတွေရဲ့ လက္ခဏာရပ်များ တစ်သက်လုံး Single အပျိုကြီးဘဝနဲ့ အရိုးထုတ်ရတော့ရတော့မယ့် လက္ခဏာ တွေ ရှိနေပြီလား..? အပျိုကြီး လက္ခဏာ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရင်တော့ Sin gle ဘဝမှာ သင့်ရဲ့ မသိစိတ်က ပျော်မွေ့နေပြီး သူများတွေ ထင်နေ၊ တွေးနေတဲ့ Rs ဘဝက ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး ပျောက်ဆုံး နေတာပါ။ အောက် မှာဖော်ပြထားတဲ့ လက္ခဏာတွေထဲ တော်တော်များများနဲ့ ကိုက်ညီနေမယ်ဆို ရင်တော့ သင်ဟာ single ဘဝကို ပျော်ပျော်ကြီး ဖြတ်သန်းရတော့မယ် ဆိုတာ သေချာသလောက် ရှိပါတယ်။ (၁) Single ဘဝမှာကို ပျော်နေတာ ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်။ မရလို့ …
” Season4Winner အဖြစ် ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် (၄)ဦး “
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ Myanmar Idol ပြိုင်ပွဲကြီးမှာတော့ Winner တစ်ယောက်ဖြစ်ဆိုတာကတော့ တကယ်ကိုမလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့ အဆိုကောင်းရုံသာမက ပရိသတ်တွေအားပေးထောက်ခံမှုဖြစ်တဲ့ Voting ကလည်း Winner ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင် Season တွေတုန်းကတော့ ပရိသတ်တွေက Winner ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရတွေလွယ်ကူလှပေမဲ့ လက်ရှိမှာတော့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ အဆိုကောင်းပြီး ပရိသတ်အခိုင်အမာရှိထားမှုတွေကြောင့် Winner ဖြစ်မယ့် ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့ ရွေးချယ်ရခက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Season4Winner အဖြစ် ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် (၄)ဦး ကတော့ (၁) အက်စတာဒေါ့သ်ချင်းဆုန် ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ချင်းမလေးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေက ချစ်စနိုးနဲ့ “ဆုန်ဆုန်” လိုခေါ်လေ့ရှိတဲ့ အက်စတာဒေါ့သ်ချင်းဆုန်ကတော့ ဒုတိယ ဆုန်သင်းပါရ်လို့ ပါ တင်စားလောက်ရတဲ့ …
“လူပျိုကြီးစိုင်းစိုင်းရဲ့ “အချစ်ဆိုတာထူးဆန်းလွန်းပါတယ်” ဆိုတဲ့စကားကို ထောက်ခံလိုက်တဲ့ အပျိုကြီးဖွေးဖွေး”
စိုင်းစိုင်းနဲ့ဖွေးဖွေးကတော့ အောင်မြင်ကျော်ကြားလူကြိုက်များတဲ့အနုပညာရှင်တွေလို့ ဆိုရမှာပါ။ စိုင်းစိုင်းဟာဆိုရင် မိန်းကလေးထုကြီးရင်ထဲကနေ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအားပေးခံရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုကို ကြာရှည်အထိန်းထားနိုင်ဆုံး အမျိုးသားအနုပညာရှင်တစ်ယောက်လို့ဆိုရမှာပါ။ လက်ရှိမှာ သီချင်းခွေပေါင်းများစွာထွက်ရှိထားပြီး ပရိသတ်ပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားနေစေမယ့် သီချင်းပေါင်းများစွာကို ရေးစပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖွေးစိန်လေးကတော့ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် မြန်မာ့အနုပညာလောကရဲ့တန်ဖိုးအထားရဆုံး အကယ်ဒမီရွှေစင်ရုပ်ထုကြီးကို “လက်ပံ၊ ကျွန်မက နှင်းဆီပါမောင်၊ ရွှေကြာ” စတဲ့ဇာတ်ကားကြီးတွေနဲ့ သုံးကြိမ်တိုင်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကိုအချိန်တိုတွင်းရောက်လာတာဖြစ်ပြီး ကြာရှည်ထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုရမှာပါ။လက်ရှိမှာ အမာခံပရိသတ်ပေါင်းများစွာနဲ့ အနုပညာခရီးလမ်းကိုလျှောက်လှမ်းနေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စိုင်းစိုင်းရဲ့ အချစ်ရေးကတော့ပရိသတ်တွေ အမြဲစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အရာဖြစ်ပြီး မနေ့ညကတော့ “အချစ်ဆိုတာထူးဆန်းလွန်းပါတယ်”ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှာရေးသားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ပရိသတ်တွေက လူပျိုကြီး အသစ်ထပ်တွေ့နေပြီလား ဆိုပြီး စိတ်ဝင်စားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖွေးဖွေးကပါ စိုင်းစိုင်းရဲ့စကားကို “တကယ်ပါ”လို့ရေးပြီး ထပ်မျှဝေလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ပရိသတ်တွေက ပွဲကျနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ …
ဘက်စုံထူးချွန်ဆုပေါင်း ၂၀၀ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ၁၆ နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူ
အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် ဖီလစ်ပိုင်ကျောင်းသူလေးတစ်ဦးက သူမရဲ့ ကျောင်းသူဘဝတစ်လျှောက်လုံးရခဲ့တဲ့ ဆုတွေကို လူမှုကွန်ယက် ဖေ့စ်ဘွခ်ပေါ်မှာ တင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ အဆိုပါပုံများကို ပြန်လည်ဝေမျှသူများပြားခဲ့ပြီး အထူးလေးစား ချီးကျူးခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်လာပါတယ်။ April Christelle ဟာ သူမရဲ့ ကျောင်းသူဘဝ တစ်လျှောက်လုံးမှာ ပညာရည်ထူးချွန်ဆု၊ ဉာဏ်စမ်းပဟေဋိပြိုင်ပွဲဆုနဲ့ အလှအပမယ်ဆုတွေအပါအဝင် ဆုတံဆိပ်ပေါင်း ၂၀၀ ပိုင်ဆိုင်ရရှိထားသူလေးဖြစ်ပါတယ်။ April ဟာ ၁ တန်းကနေ ၁၀ အထိ အမြဲတမ်း ပထမဆုရခဲ့သူဖြစ်ပြီး နိုင်ငံနဲ့အဝှမ်း ကျောင်းရဲ့ဂုဏ်ကိုဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသူလေးဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလို သူမရရှိခဲ့တဲ့ ဆုတံဆိပ်တွေကို ဖြန့်ခင်းပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ကာ တင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ သူမရဲ့ မိသားစုနဲ့အတူ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကနေ ပြောင်းရွေ့ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံ …
သင့်ဆံကေသာကို အမြန်ဆုံးအရှည်မြန်စေမယ့် သဘာဝပေါင်းတင်နည်း… မင်္ဂလာပါနော်။ မိန်းကလေးတို့ဘုန်း ဆံထုံးဆိုသလို ဆံကေသာရဲ့ အလှဟာ ကျွန်မတို့ မိန်းကလေးတွေ တန်ဖိုးထား မြတ်နိုးရတဲ့ အလှတရားတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ နူးညံ့ချော့မွေ့ပြီး ပျော့ပျောင်းတဲ့ ဆံကေသာကို မိန်းကလေးတိုင်းပိုင်ဆိုင်ချင်ကြတာ သဘာဝပါပဲ …။ သဘာဝ ပေါင်းတင်နည်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲကမှ ဒီတခါမှာတော့ စာဖတ်သူတို့ရဲ့ ဆံကေသာကို အမြန်ဆုံး အရှည်မြန်စေမယ့် နည်းလမ်းလေးကို မျှဝေပေးသွားမှာပါနော် … ။ ။ ” ပါဝင်ပစ္စည်း ” ဗီတာမင် E ၁ တောင့် ရှားစောင်းလက်ပပ် စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း သံလွင်ဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း ဗာဒံဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း …
အရမ်းတွေပိုကဲလာလို့ ရွံလာပြီလို့ပြောတဲ့ ပရိသတ်ကို ထိထိမိမိပြန်ပြောလိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
အရမ်းတွေပိုကဲလာလို့ ရွံလာပြီလို့ပြောတဲ့ ပရိသတ်ကို ထိထိမိမိပြန်ပြောလိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် နိုင်ငံကျော် မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်က အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ဆက်တိုက် ရရှိထားတဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ အမိုက်စား ခန္ဒာကိုယ်နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ဝတ်ပုံစားပုံတွေကလည်း ပရိသတ်တွေကို ဖမ်းစားထားနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ အပြင်နေထိုင်မှုပုံစံကို ပရိသတ်တွေက စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့် အားပေးကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ ဝတ်ပုံစားပုံကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေ အများကြီး ရှိသလို၊ မကြိုက်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေလည်း အနည်းအကျဉ်းရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ပရိသတ်တစ်ယောက်က သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ ဝတ်ပုံစားပုံတွေကို မကြိုက်ကြောင်း ပြောထားတာကို တွေ့ရပါတယ် …။ …
This Month : 33878
This Year : 205104
Total Users : 500237
Total views : 2069861